Mashiinka Alxanka - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Qalabka elektarooniga ah ee walxaha iska caabinta
Alxanka iska caabin waa in la cadaadiyo gabalka shaqada si loogu dhejiyo inta u dhaxeysa labada koronto iyadoo hadda la dhex geliyay sare. Waa hab ah in kuleylka iska caabinta ee ay soo saaraan xilligan maraya dusha xiriirka qaybta shaqada iyo aagga u dhow loo isticmaalo in lagu kululeeyo si loo dhalaaliyo ama xaalad caag ah loogu xiro birta. Alxanka iska caabin ugu weyn waa qaab alxanka kaalinta, alxanka tollayn, alxanka saadaasha iyo alxanka dabada.
Horumarinta warshadaha casriga ah sida baabuurta, maraakiibta, diyaaradaha, iyo jidadka tareenka xawaaraha sare leh, waxay ubaahanyihiin mashiinada alxanka caabbinta caabbida leh ee dhexdhexaadka ah iyo kuwa sare iyo shaqooyinka diode ee hada aadka u sareeya maadaama qaybta muhiimka ah si aad ah loogu baahan yahay.
Iyada oo hal-abuurnimo joogto ah iyo karti cilmi baaris oo xoog leh, Runau Electronics waxay soo saartay diode heer sare ah oo hadda jira oo lagu soo bandhigay cufnaanta sare ee hadda jirta, danab aad u hooseeya oo heer gobol ah iyo caabbinta kuleylka oo aad u hooseeya oo isbarbar dhigi kara si toos ah, khafiifka silikoon qafiif ah, danab marinkiisu hooseeyo, iska caabin yar, heerkulka isgoyska sare, Dahabka ama baahinta platinum oo ay weheliso aaladda elektaroonigga ah si loo xakameeyo nolosha dadka laga tirada badan yahay, u adeegso fiirsashada anode oo hooseysa iyo tikniyoolajiyad laba-saldhig ah si loo gaaro ujeeddada soo noqnoqodka sare ee jilicsan iyo dhakhsaha badan. Diode-ka ayaa lagu soo raray guri iyo guryo-yar. The diode alxanka heer sare-sare ah waxaa lagu qaadan karaa alxanka iska caabin ah iyadoo inta jeer ee laga bilaabo 1KHz ilaa 5 KHz.
Ultra-Sare Alxanka hadda Albaabada Liiska
AnigaFSM @TVJIM& 10ms
Danab ilaa 400V